I-Sweet Retreat Historic Bungalow 1880's
Le ndlu ifikelele kwinqanaba lokuhlangabezana nemigangatho yokucoca intsholongwane ye-Corona ekhaya. Olu jiko luncinci lwe-bungalow yenkulungwane lunayo yonke into. Eli khaya lisanda kulungiswa ukuze libe nazo zonke izinto eziphuculweyo ngelixa lisagcina imvakalelo yembali yakudala. Omnye uya kuba nofikelelo olulula kwikhaya ngekhowudi yekhiphedi yokuza nokuhamba njengoko ethanda. Ukuba uza nenja kukho intlawulo ye-$25 yesilwanyana sasekhaya ngenja nganye ngosuku!
Olu jiko luncinci lwe-bungalow yenkulungwane lunayo yonke into. Eli khaya lisanda kulungiswa ukuze libe nazo zonke izinto eziphuculweyo ngelixa lisagcina imvakalelo yembali yakudala.
Ikhaya linamagumbi amabini okulala, ibhafu enye kunye nekhitshi elikhulu elinempahla yokulungisa ukutya. I-grill yegesi iyafumaneka kwi-patio engasemva ukuba ubani uziva efuna ukupheka ngaphandle.
Kukuhamba umzuzwana kuphela ukusuka kwimbali ethandekayo ye-Twin Lakes INN umntu unokuthatha isidlo esimnandi okanye azonwabisa ngesiselo okanye ezibini.
IVenkile yokuGqibelela ikwakuhambo olufutshane nje kuphela ikubonelela ngazo zonke izinto eziluncedo.
Eli khaya likufutshane kolunye lolona kuloba lubalaseleyo kwiphondo laseColorado. Khetha kumachibi anomkhenkce okanye umlambo waseArkansas. Umkhondo weColorado umgama nje omfutshane kude. Imozulu othanda ukubaleka, ukunyuka, ukutyibilika, ibhayisekile yentaba, isihlenga samanzi amhlophe, amavili amane, okanye ukuloba le ndawo yimecca yomntu othanda ngaphandle. Le ndlu ikwafumaneka kwibala lomdyarho we-100.
Ilali ekwi-Twin Lakes iye yakhula ngokuthandwa emva kokuba igolide yabhaqwa kule ndawo, urhwebo lugxile kubasebenzi basezimayini. Ngeminyaka yoo-1860, indawo, eyayisaziwa ngokuba yi-Dayton, yaba sisihlalo sedolophu. Xa yafunyanwa igolide kwi-Independence Pass, kwasekwa indlela erhafelwayo phakathi kweLeadville neAspen, nto leyo eyenza iTwin Lakes ibe liziko lothutho phakathi kwezi dolophu zimbini. Emva kokukhula kwesilivere eLeadville ngo-1878 ukuya kutsho ngo-1879, iTwin Lakes yaba yindawo edumileyo yasehlotyeni, itsala izityebi. Ukujonga ngakumbi kwimbali yeTwin Lake, landela olu khenketho lwembali, oluqaqambisa ezinye zezakhiwo zokuqala zedolophu.